Qaramada Midoobay: Malaayiin caruurta Yemen ah ayaa macaluul u dhiman doona haddaan gargaar degdeg ah la helin | Xogsame News | Latest News In Africa
Hay’adaha Qaramada Midoobay kuwooda gargaarka kuwa ugu waawayn midkood ayaa ka dayrisay in malaayiin caruur reer Yemen ahi ay macaluul qarka u saaranyihiin maadaamada oo uu jiro “hoos u dhac weyn” oo ku yimi gargaarkii aadamenimo oo kuu kallifay Covid-19.
Unicef ayaa sheegtay in ay u baahantahay ku dhawaad nus bilyan doolar oo gargaar ah si ay u badbaadiso caruurta dalkaas oo ay Qaramada Midoobay shaacisay in ay ka jirto duruuftii ugu ba’nayd ee aadamenimo dunida.
Qiyaastii laba milyan oo caruur ah ayaa nafaqo darro xumi ku haysataa Yemen oo uu ragaadiyey dagaal shan sannadood ka socday.
Unicef waxay sheegtay in hadii aanay helin 54.5 milyan oo doolar dabayaaqada bisha Ogost, in ku dhawaad 23500 oo caruur ahi ay u dhiman karaan nafaqo darrada haysata.
Gooni u goosadka Yemen oo ku dhawaaqay ismaamul u gaar ah
‘Ninka adduunka ugu da’da weyn’ oo ka kacay cudurka corona
Malaayiin kale ayaan iyaguna heli dooni cuntada nafaqada leh iyo fiitamiinada ama tallaalka lagaga hortago cudurrada dilaaga ah, ayey digniinta ku sheegtay hay’addu.
Waxa kale oo ay sheegtay in 19 milyan oo qof oo ay ku jiraan hal milyan oo dumar uurle ama caruur nuujinayaa ay sidoo kale waayi doonaan adeega caafimaad hadii aan deeq lacageed loo helin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xarigga ka jaray Golaha Murtida iyo Madadaalada Qaranka ayaa ku bogaadiyey ganacsatada Soomaaliyeed, Rugta Ganacsiga iyo shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda sida ay uga mira dhaliyeen baaqii ku saabsanaa in laga wada qeyb qaato Olalaha Isxilqaan ee dalka dib loogu dhisayo.
Haweeneyda Ra;iisul Wasaaraha ka ah waddanka Denmark, Mette Frederiksen ayaa markii saddexaad dib u dhigtay, si ay uga qeyb gasho shir ay yeelanayaan madaxda dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub.
Kulankaas, oo ku saabsan mowduucyo la xiriira aruurinta dhaqaale looga soo kabsado saameynta cudurka Covid-19, ayaa dhici doona 17,-ka iyo 18-ka bisha July ee foodda nagu soo heysa.
Barta ay ku leedahay Facebook ayey ku sheegtay inay ku khasban tahay “ilaalinta danaha Denmark”.
Booliska caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa sheegay burcad hubeysan iyo booliska rasaas ay isweydaarsadeen inuu hal qof ku dhintay hal qofna uu ku dhaawacmay.
Boolisku waxay sheegeen burcad hubeysan oo ka koobnaa siddeed xubnood iney weerareen isla-markaana ay dhac u geysteen guri ay degganaayeen muwaaddiniin u dhashay dalka Shiinaha.
Guriga ay burcadda dhaca u geysteen oo ku yaallay xaafadda Ruwaandha ee magaalada Addis Ababa waxaa markiba soo gaaray qaar ka mid ah booliska Federaalka dalkaasi.
Bolisku marki ay burcadda u sheegeen iney isdhiibaanna ay raggi burcadda ahaa diideen isla-markaana ay booliska rasaas ku fureen sidaasina ay labada dhinac ku dhex martay israsaaseyn xoogaha socotay.
Waxaana halkaasi lagu dilay mid ka mid ah raggi burcadda ahaa, mid kalana lagu dhaawacay iyada oo ay 6 ka mid ah burcaddana booliska gacanta ku dhigeen.
Yaa iska leh Webiga Nile – muxuuse muhiim u yahay?
Farmaajo iyo Muuse oo jeediyay hadallo kala fog
Mid ka mid ah burcaddi hubeysneyd ee dhaawaca soo gaaray waxaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla magaalada Addis Ababa.
Boolisku wuxuu intaa ku daray raggan burcadda ah ee ay gacanta ku dhageen falal burcadnimo oo noocan ah iney xaafada badan oo ka mid ah magaalada Addis Ababa ka geysteen.
Iyaga oo adeegsanaya dharka booliska iyo gaadiid kala duwan, booliskana in mudda ah ay ku raad joogeen.
Israsaaseynti shalay gelinki dambe dhex martay booliska iyo burcadda hubeysneyd waxay khalkhal gelisay iisu socodka xaafadda dhibka uu ka dhacay.
Mid ka mid ah shacabka ku nool goobta uu dhibku ka dhacay wuxuu BBC u sheegay iney weligood wax noocani ah la kulmin oo ay tahay arrin ugub ah.
Hase yeeshee, booliska wax faahfaahin ah kama bixin qasaaraha soo gaaray dadki ajaanibta ahaa ee ay burcadda weerareen iyo booliski howlgalka fuliyey midna.
Magaalada Addis Ababa ayaa lagu tirayaa iney ka mid tahay magaalooyinka ugu Nabdoon Afrika balse sanadihi u dambeeyey xaaladdeeda amni ay sii xumaaneysay.
Arimaha bulshada10 months ago
Arimaha siyaasadda10 months ago
Ciyaaraha10 months ago
Diinta10 months ago